Mazuva ano, mazhinji maTV akangwara akashongedzerwa neBluetooth remote control seyakajairwa, asi iyo yekudzivirira kure inokundikana kana ikashandiswa kwenguva yakareba. Hedzino nhatu nzira dzekugadzirisa kure kudzora kutadza: 1. Ch ...
Kune akawanda uye akawanda ma-module emamaki pamusika, asi anogona kuve akapatsanurwa muzvikamu zvitatu: 1. BVUNZA superheterodyne module: tinogona kushandiswa senge iri nyore kure kudzora uye kutapurirana kwedata; 2. Wireless transceiver module: Inonyanya kushandisa imwechete-chip mic ...
Infrared remote control: infrared inoshandiswa kudzora michina yemagetsi kuburikidza nemwenje usingaonekwe senge infrared. Nekushandura infrared mwenje kuva madhijitari anonongedzwa nemidziyo yemagetsi inogona kuona, iyo yekumusoro control inogona kure kudzora emagetsi magetsi kure kure. Zvisinei, zvakakodzera ...